के लेखिन त्यस्ताे ? एक छात्राले लेखेकाे उत्तरपुस्तिका जाँ’च्दाजाँ’च्दै शिक्षक बे’होस भए पछी – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/के लेखिन त्यस्ताे ? एक छात्राले लेखेकाे उत्तरपुस्तिका जाँ’च्दाजाँ’च्दै शिक्षक बे’होस भए पछी
के लेखिन त्यस्ताे ? एक छात्राले लेखेकाे उत्तरपुस्तिका जाँ’च्दाजाँ’च्दै शिक्षक बे’होस भए पछी
काठमाडौं : एउटा यस्ताे उत्तरपुस्तिका भेटियाे जसलाई जाँचकले हेर्नासाथ चकि’त परेका छन् । परीक्षामा पास हुनका लागि विद्यार्थीहरुले अनेक उपाय अपनाउँछन् । परीक्षा पास गर्नको लागि घोटि’एर पढ्ने विद्यार्थी धेरै छन् । त्यसबाहेक कसैले परीक्षा हलमै चि’ट लिएर जान्छन् र उत्तर चो’र्छन् । केहीले भने परीक्षाको उत्तर पुस्तिकामै उत्तर पुस्तिका जाँच्ने शिक्षकलाई पत्र समेत लेख्छन् ।
यस्तै अनौठो घटना सामाजिक संजालबाट सार्वजनिक भएको छ । परीक्षा हलमा आएपछि कुनै उपाय नलागेपछि यी छात्राले यतिसम्म आश्च’र्यजनक काम गरेकी छिन् । यी छात्राले आफ्नो लागि त निकै राम्रो उत्तर लेखिन होला तर के कोही गीत लेख्दैमा पास होला र ? यी छात्राले सुरुदेखि अन्तिमसम्म केवल बलिउडका गीत लेखेकी छिन् ।
उत्तर पुस्तिकाको अन्त्यमा भने यी छात्राले आफ्नो गरिबीको हवा’ला दिँदै पास गराइदिन गुहा’रसमेत मागिन । यो कपी परी’क्षण गर्ने शिक्षकले यी छात्राको गु’हार त मानेनन् बरु यो कापी नै परीक्षा अधिकारीलाई बुझाइदिए । यो उत्तर पुस्तिकाको केही अंश अहिले सामाजिक संजालमा भाइ’रल भइरहेको छ । सामाजिक संजालमा यो उत्तर पुस्तिका जाँ’च्ने शिक्षक नै बे’होस भएको भन्दै फोटो भाइ’रल भइरहेको छ यद्यपि यो कुराको पु’ष्टि भने कतैबाट भएको छैन ।